Ukuphawula Kwamuntu: Ungabhala Kanjani Ngami Ikhasi | Martech Zone
Ukuzenzela: Ungabhala Kanjani Ngami Ikhasi
ULwesibili, April 19, 2016 Douglas Karr
Andrew Wise ubhale i-athikili ejulile impela nge I-Ultimate Indlela Yokwenza Ikhasi Elimayelana Nami ukuthi kufanele uyohlola ngokuningiliziwe. Ngokuhambisana nendatshana, wakhe i-infographic esabelana ngayo ngezansi ehlanganisa ithoni nezwi, izitatimende zokuvula, ubuntu, izethameli eziqondiwe nezinye izidingo.
Ngiyakuthanda ukufaka amasenti ami ama-2 kulezi zinto, ngakho-ke nakhu kuhamba. Ngingakukhuthaza impela njengebhizinisi noma njengomuntu ngamunye, ukuthi uye kude kakhulu nendawo yakho yokududuza. Ngiyazi abantu abaningi kakhulu abangathandi ukuzikhulumela, abathandi izithombe abazithathe, futhi badelela amavidiyo noma umsindo wabo. Mhlawumbe baze bakholelwe ukuthi lo mkhuba uyisenzo sobudlabha. Kukaningi ngibona izinkulumo ezinjengalezo ezinkundleni zokuxhumana.
Nayi impendulo yami: Ikhasi lakho Elimayelana Nami alilona elakho!
Ama-selfie, amavidiyo akhulumayo, izithombe zobungcweti, nezincazelo zakho zezethameli zakho. Uma ungumuntu omangalisayo futhi othobeke kakhulu… wakho Mayelana nami ikhasi kufanele likubonise lokho. Vele, kuzwakala kuxaka ukwazisa wonke umuntu ukuthi uthobekile. Kepha uma uthobekile, umuntu uzokwazi kanjani? Ngabe uzolinda ukuhlangana ngamunye nomuntu ngamunye ukuze babone ukuthobeka kwakho? Noma ulinde abanye ukuthi bakhulume ngokuthobeka kwakho? Ngeke kwenzeke.
Uma inhloso yakho ukwakha igunya nobuholi esikhaleni sakho, umahluko wakho omuhle nguwe. Akuyona imfundo yakho, umlando wakho womsebenzi, nguwe! Nguwe owazisa wonke umuntu ukuthi kungani kufanele asebenze nawe. Abantu bayathanda ukusebenza nabantu abafuna ukusebenza nabo. Izinqumo zokuthenga zivame ukuba nemizwa futhi isinqumo sincike ekutheni ithemba lakho likuthemba kangakanani futhi likukhombe njengesiphathimandla emsebenzini wakho.
Ukunikeza abasebenzisi be-search engine kanye nabavakashi besiza ngayo yonke imigqa abayidingayo - izinkulumo ozenzile, abaholi ozihlanganisa nabo, izincwadi ozibhalile, ngisho nomyalezo wakho kubo kubalulekile.
Inothi eliseceleni: Nami nginecala! Bengilokhu ngihudula izinyawo zami iminyaka eminingi ngakha ikhasi elizinikele esizeni senkampani yethu mayelana nokukhuluma kwami… kepha lesi seluleko esivela ku-Andrew siyangishukumisela ukuba sikwenze!
Tags: Mayelana namimayelana nekhasiu-andrew uhlakaniphileuphawu lomuntu siquikhasi lomuntu siqu
I-3D Printing Technology Izoliguqula Kanjani Ikusasa Lethu
Ngo-Apr 22, i-2016 ku-4: i-25 PM
Lokhu kuyinto enhle.
Kulabo abangabazayo ngokudalula izinto abazithandayo nabazithandayo ngoba bengafuni ukubonakala bengenzi kahle, ngisho lokhu:
Akukona okobuchwepheshe kumayelana neqembu, amandla weqembu angaphandle.
Uma umfundi wakho ebuka umuntu ongaphandle kweqembu labo bazoba nenzondo enkulu kuwe.
Ngokuveza okuncane ngempilo yakho, njengokuthola izingane, ukugijima, ukuthanda kwakho ukudla kwaseMexico uzongena ujule eqenjini lapho abantu bazokubona ngokukhanya okuhle.
Kufana nomphumela we-halo.
Ngo-Apr 25, i-2016 ku-4: 59 AM
Ngokubona kwami ​​isisombululo esizedlula zonke ukuzethula njengomuntu othembekile. Abantu bathanda ukwenza ibhizinisi nosomabhizinisi ohlakaniphile, onamasiko futhi othembekile.
Feb 7, 2017 ngo-9: 42 PM
Ngivale amadili amaningi ngokususelwa ekuxhumaneni ngokwabelana ngokudla kwami ​​engikuthandayo namakhasimende angaba khona.